Nzira yekuwana sei backlinks kune webhusaiti yako iyo inoshanda SEO?
Inbound (inouya) links, kana backlinks, ndeyechitatu-fane source mabhii anongodzokera kuwebsite yako kana blog. Uye nei zvakakosha zvikuru kunzwisisa maitiro ekuwana backlinks kune webhusaiti yako? Nemhaka yokuti backlinks zvino yava kuonekwa pakati pezvinhu zvitatu zveGoogle zvinonyanya kushandiswa, maererano neshoko rehurumende rinotumirwa nevatungamiri vekutsvaga kwenyika kudarika gore rino. Kunze kwemashoko akazara eNjini Engine Optimization, backlinks inogona kuonekwa sevhoti rekuvimba - zvinyorwa zvako zvinonyatsozivikanwa kukosha. Nokudaro nzvimbo yose yepawebsite kana bhuroti inogona kuvimbwa. Nenzira iyo, injini yekutsvaga yeGoogle inofanirwa kuongorora PageRank - inorema backlink imwe inowanikwa nepeji yewebhu yose paInternet - blue book values boat. Kunzwisisa kukosha kwezvinhu zvakasikwa uye nehuhu hunoenderana nekuvaka chivako, pasi apa ndichaenda kukuratidza kuti ungawana sei backlinks kune webhusaiti yako kana bhulogi inoshanda chaizvo kune SEO, pakupedzisira-kuti uzviwanire pane imwe nzvimbo mukati me-10 mhinduro dzeGoogle.
Nzira yekutora backlinks kune webhusaiti yako yeSeO zvinangwa
Kana zvasvika pakuumba SEO-friendly friendly profile, zvinhu zvose pamusoro pe backlink zvine basa - kutanga iyo nzvimbo imwechete inobatanidza iwe uye yega simba ravo giredhi, pane zvose zvakabatanidzwa zvakaenzana, uyewo nzira yayo yekuiswa kwepamusoro peji. Heino nzira yekuwana backlinks kune webhusaiti yako nenzira yakarurama - iva nechokwadi chokuti une zvinhu zvose zviri munzvimbo uchifunga nezvekutevera nhokwe idzi:
nhamba yezita rekuregererwa ine zvikwata zvinokuudza iwe pamwe zvinhu zvinokosha kupfuura zvose mumaziso eGoogle, kana zvasvika pakutsvaga kutarisa mikana yepamusoro yehutano hwehuwandu hwepamusoro.
Chibatanidza vape simba - zvose pamwero wega woga (kuverengwa kwega rega peji yega yega), uye kana zvichitorwa pamwero. Zvinoreva kuti kuva nehupamhi hwemashure ehutano hwakakura huine simba guru huchava huri nani, pane kungotengesa pahuwandu hwavo uye hapana chimwe chinhu.
Chiremera chikuru chinoremekedzwa hazvirevi kuti zvinenge zvese nezvemashoko ehupfumi ehuwandu hwepasi rose kana vaparidzi vakawanda vepasi - webhusaiti yako yebhizimusi webhusaiti kana niche blog inogona kubudirira kubudirira zvakafanana.
Zera remadhorosi dzimwe nguva rinogona kuverengwa sechinhu chinokosha zvikuru, muchikamu chinotaurira hutachiona hune hutano hwemashure endangariro dzeSeo zvinangwa. Cherechedza, zvisinei, kuti iwe haufaniri kunge uine hukama huno nehutano hwemasimba chete.
Zvakaitika kare kumashure hazvisi zvakakosha kuneGoogle, panzvimbo yeavo vanobva kunzvimbo dzakarurama dzinobatanidzwa munyaya yekukurukurirana imwechete, kana kuenzanidza nemabhizimusi emabhizimisi. Kutaura zvazviri, kuva neshure risina maturo kunogonawo kududzirwa ne injini yekutsvaga sezviito zvinoshungurudza kana zvimwe zvezviito - naizvozvo iwe unogona kuzviwanira iwe wakaoma (dzimwe nguva kunyange usingakanganwiki) chirango chepamusoro.
Kubatanidza hutano hwehutano hwakasiyana hahufaniri kutongororwa zvakare. Usanonoka kuva nehukama nemamwe mawebhusayithi asina kuenzana kana mablogi ane simba rakasiyana, kuvimba, PageRank, uye chero ipi zvayo yakafanana. Kutaura zvazviri, iyo inenge iri chigadziro chako chakanakisisa-iyo iyo Google inonyanya kutarisa kumaruva akasiyana-siyana akasiyana-siyana, zvichida achibvuma nzira yavo yekusika.